GBNF – HlaMin
Dr. Rimon Than (GBNF)
He is the elder son of U Maung Maung Kyi, my classmate at SPHS and I.Sc.(A), my crew mate at RUBC and my best man at my wedding. Sad to lose an accomplished “Rescue Team Leader”. Sad Event The sad event occurred on February 15, 2013. Squadron Leader […]
Dr. Khin Nyo Thet (GBNF)
Farewell Dhamma Talk for co-founder of Aye-Thet Scholarship by Ashin Osadha အေး+သက်မိခင်ကြီးအတွက် နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်တရား မနေ့က မနက်ပိုင်းမှာ မကျန်းမာတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒကာမကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ညိုသက်ဆီ သွားပြီး ပရိတ်ရွတ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂-ရက်လောက်က တယ်လို့ ပင့်ထားတာပါ။ ဒကာမကြီးနဲ့ ကျုပ်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရင်းနှီးမှုရှိသလို သူသိချင်တဲ့ တရားတွေကိုလဲ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒေါက်တာလင်းဆွေအေးနဲ့ ‌ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ညိုသက်တို့ လင်မယားက ကျုပ်အမေရိကားရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ စတင် ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကျုပ်က နွေရာသီမှာ ကလေးတွေ […]
Family of writers Parents : U Khin Maung Latt and Daw Khin Myo Chit Spouse : Daw Shwe Yi Win Children : Maung Yit & Junior Win ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) အသက် ၈၁ နှစ် ရန်ကုန်အချိန် ဩဂုတ် ၃၊ ည ၁၁ နာရီ ၁၅ ခန့်က ၊ ရန်ကုန်နေအိမ်မှာ ကွယ်လွန်ပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ He’s got […]
Lost 12 members in July, August and September 2021 U Tin Sun (C) U Maung Maung Kaung / Yi Pin (M) U Aung Myint (C) U Tin Aye / A Rauf (EP) U Tun (Met) U Thein Swe (EP) U Soe Win (M) U Khin Maung Gyi (M) […]
U Soe Lwin (M, GBNF)
By Hla Min (Lifelong Learner) on September 10, 2021 • ( Leaveacomment )
Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) wrote : သူငယ်ချင်း စိုးလွင်(စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် – ငြိမ်း) ကွယ်လွန်ခြင်း အတွက် ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း။ ” အလှည့်သင့် …”(သူငယ်ချင်း စိုးလွင်… သို့) သူငယ်ချင်း…မင်းရဲ့ အလှည့်၊ မြန်လှချည့်လားထင်မှတ်မှား ဖြစ်တရား ခုံမင်၊ ဆင်ခြင်ဖို့ ဓလေ့ရင်မှာပွေ့ပိုက် ထွက်ခွာပြီ။ လောကလူ့ရွာ၊ ကံံကြမ္မာလျှင်ဧည့်လာဧည့်သွား၊ အသိသားနဲ့ဖဝါး ဒဏ်ရာ၊ ခြေရာ ပျောက်ရှလှိုင်းမထတော့…ဖွဖွ လှမ်းထောက် တိတ်ဆိတ်နေ။ သူငယ်ချင်း…မင်းမှာ ရိုးဂုဏ်၊ ကုံလုံကြွယ်ဝနှုတ်က ဟ တိုင်း၊ ရိုင်းစိုင်းမရှိသိမ်မွေ့ဘိ တိုးညင်၊ ခင်မင်မှုရှိုင်းနက်သက်သေ တစ်ကမ္ဘာ တည်လေခဲ့။ […]
Kyaw Tint (Min69, GBNF)
U Aung Min (M69) wrote : Sad news for RIT69ers I inform you all with saddened heart that one of our friends, Ko Kyaw Tint (Mining69)(Moscow byan), passed away in the morning of 8 September 2021 at the age of 74 of coronary heart disease. He had been […]
S. Arya (M62, GBNF)
By Hla Min (Lifelong Learner) on September 7, 2021 • ( Leaveacomment )
Saya S Arya
Thein Maung (M69, GBNF)
U Thein Maung BE ( Mechanical)1969ပုလိပ်ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံ။သမိုင်းအထည်စက်ရုံ။ရွှေတောင်အထည်စက်ရုံ။ဒု -ညွှန်မှုး (ငြိမ်း) – စက်မှု(၁)MD.Myanmar Besting Co;Ltdသည် ယနေ့ (၇-၉-၂၀၂၁)ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါ၍မိသားစုနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
Sayagyi U Ba Hli (GBNF)
By Hla Min (Lifelong Learner) on September 7, 2021 • ( 1 Comment )
Sayagyi was the first native Dean of Engineering. He also taught Civil Engineering courses. He wanted to make sure that every engineering student know most students who are senior or junior. Sayagyi earlier served as Professor of Civil Engineering and Principal of GTI. Sayagyi proposed the Twinning Program […]
Sayagyi isaPhwa Bet Taw of RU (Rangoon University) and the first RU Students’ Strike. Sayagyi isasaya of our sayas. His students include Saya U Ba Than, Saya Dr. Aung Gyi, Saya U Min Wun, and Saya U Khin Aung Kyi. Tekkatho Maung Thin Char […]